Chitsanm's Blog: 2007
ငါ ပြန်မြင်နေတရ် ...
ငါ့နားထဲမှာ ကြားယောင်နေမိတရ် ...
အခု ... နှမျောစိတ်နဲ့အတူ
မေ့ပစ်လိုက်ဖို့ ကြိုးစားနေမိတရ် ....
လွမ်းတော့ မလွမ်းပါဘူး !!!
နှင်းဆီဖူးလေးတွေရဲ့ ကြိုးကိုင်ရာအတိုင်း ကခဲ့ဖူးတယ်
ရင်ခုန်သံတွေ ထပ်တူညီတာ အချစ်...
ကဗျာကို သီဖွဲ့ခံစားစေနိုင်တာ အချစ်...
အနည်း၊ အများ ကွဲပြားပေမယ့်
ချစ်မိသူတိုင်း ပိုင်ဆိုင်လိုစိတ်ရှိတာ အချစ်...
အလှတရားကို ခံစားစေတာ အချစ်...
လွမ်းတတ်အောင် သင်ပေးတာ အချစ်...
သူငယ်ချင်းတို့ အမျိုးမျိုးခံစားကြတာ အချစ်...
ပြောပြရုံနဲ့ ပြည့်စုံမလာတာ အချစ်...
သူငယ်ချင်းတို့ ကိုယ်တိုင်ခံစားကြည့်....။ ။
``တိတ်ဆိတ်စွာရင်မှာခံစားရင်းနဲ့ မအိပ်စက်နိုင်တဲ့ ညတွေရဲ့အလည်မှာ မွန်းကြပ်လှတဲ့အိပ်မက်ထဲကမင်း တစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်လိုစိတ်တွေနဲ့အတူမျှော်လင့် နေချိန်မှာ ငါ့ရဲ့ကြေကွဲစွာဟစ်ကြွေးလိုက်တဲ့အသံကို မင်းလေးကြားသိနိုင်မယ်ဆိုခဲ့လျှင်.....´´
အချစ်ကိုရူးသွပ်စွာ ကိုးကွယ်ခဲ့သူတစ်ယောက်။ အချစ် များစွာပေးဆပ်ချင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း အချစ်ကံခေလှတဲ့ ငါ့အတွက်တော့ အချစ်ကိုမျှဝေခံစားပေးမယ့်သူဆိုတာ နတ္ထိ။ သူနဲ့ သူ့ရဲ့အချစ်ကို စွဲလန်းစွာတောင်းတမိကာ ဖွင့်ဟတောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း တုန့်ပြန်မှုက မထီမဲ့မြင်အဖြစ် သတိမမူ ဂရုမပြု။
မမျှော်လင့် မမျှော်သာတဲ့တစ်နေ့မှာတော့ သူ့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုအစုံရဲ့ ညွှတ်ကွင်းထဲမှာ ကျရောက် သွားသူက ငါ...။ ပီပီပြင်ပြင်မရှိလှတဲ့ အချစ်စကားမကျတကျ စကားလုံးလေးတွေကြောင့် သူ့ရဲ့ဖြေသိမ့်စကားလေးတွေကို ကြားသိလိုက်ရပြီ။ ငါ့ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်လင်းရောင်ခြည် တန်းဟာ သူပေါ့...။
သူကပေးထားတဲ့ မျှော်လင့်ချက်စကားလေးတွေကြောင့် အတွေးမှာလွှမ်းပြီး ကျွမ်းလုမတတ်။ စိတ်ကူးတာရှည်သည်နှင့်အမျှ မျှော်လင့်ခဲ့ရက်များစွာကို ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီ။ ကိုယ့်အတွက် လွမ်းရက်ဆက်လေတိုင်း သူ့အတွက်အချစ်တွေက ပိုဆဲ... ပိုမြဲ...။
မျှော်လင့်ချက် အကြင်နာရှိသူ၏အရောင်က လွမ်းရောင်မသမ်းသည့်အပြင် ဖြေသိမ့်စကား လေးတွေကိုပင် မှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်နေသည့်အလား။ အချစ်စကားလေးတွေနဲ့ ငါချစ်ရသူ ``သူ´´တစ်ယောက်ကို ထပ်မံဖွင့်ဟရန် ကြံရွယ်ခဲ့သော်လည်း ချစ်သူစိတ်ကွက် အနေ ခက်မှာစိုးလို့ စကားပင်မ၀ံ့ ပြောမထွက်ခဲ့။
ရင်မှာမျှော်လင့်ထားသူက မင်းတစ်ယောက်ပဲပေါ့။ မင်းရဲ့ဖြေသိမ့်စကားလေးတွေက မက် လောက်အောင်ပဲ ဆွဲထားခဲ့သလား၊ ပြတ်တောက်အောင်ပဲ ရက်စက်သွားလေမလား ဆိုတာ မသိနိုင်တဲ့ငါ့အတွက်တော့ ရေထဲကလရိပ်ကို မျက်စိစုံမှိတ်ပြီး ချစ်မိနေပြီလား။ ငါ့ရဲ့ စိတ်ဝိဥာဉ်ရဲ့အဖြေမှန်ကို မင်းသိခဲ့ရင် စာနာပေးလှည့်ပါ ကိုယ့်ရဲ့အချစ်ဆုံးသူရယ်....။
“သူငယ်ချင်း... ဘ၀ရဲ့အာရုဏ်တက်နေ ထွက်ချိန်လေးအပြီးမှာ မင်းနဲ့ဒို့ တွေ့ဆုံ ခဲ့ကြတယ်နော်...။ ဘ၀အတွက် အားမာန် သစ် တွေကိုမွေးပြီး ဘ၀ရဲ့နေ၀င်ချိန်လေး မတိုင်မီ ပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါအုံးစို့”...
ငယ်စဉ်ကပေါင်းသင်းခဲ့ရသောသူငယ်ချင်း၊ ကြီးခါမှ တွေ့ခဲ့ရသောသူငယ်ချင်း၊ တာဝန် ကိုယ်စီတွေ လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေချိန်မှာ ဆုံဆည်းရသောသူငယ်ချင်း၊ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် မမျှော်လင့်ဘဲရင်းနှီးသွား ခဲ့ရသော သူငယ်ချင်း၊ လူချင်းမမြင်မတွေ့ပေမဲ့ ဆက်သွယ်မှုကွန်ယက်အမျိုးမျိုးနဲ့ သိကျွမ်း ခဲ့ကြသော သူငယ်ချင်းများ စတဲ့ သူငယ်ချင်းများအားလုံးနဲ့ သိကျွမ်းရင်းနှီးရခြင်းကို ဘယ် အရာနဲ့မှ တန်ဘိုးဖြတ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
သူငယ်ချင်းရယ်လို့မှ ဖြစ်လာခဲ့ရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နားလည်မှုဆိုတာ အမြဲ ရှိရမှာပေါ့။ တခါတလေ သတိလက်လွတ်ပြီး မမျှော်လင့်ပဲ မှားခဲ့တာတွေရှိကောင်းရှိမယ်။ ကိုယ် က မှားသည်ဖြစ်စေ၊ သူက မှားသည်ဖြစ်စေ ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေ ခွင့်လွှတ်နားလည်ကြ ရမှာပေါ့။ ဒါမှလည်း သူငယ်ချင်းတွေအားလုံး စိတ်လက်ချမ်းသာစွာနဲ့ အရာရာကိုအင်အား ဖြစ်စေမယ်လေ။ ငါတို့သူငယ်ချင်းတွေစုပေါင်းပြီး ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီ နေသွားကြ မယ်ဆိုရင် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို ပိုင်ဆိုင်သွားကြမှာ လွဲမှာမဟုတ်ပါဘူး သူငယ်ချင်း။
သူငယ်ချင်းနဲ့ဒို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယ်စီနဲ့ လမ်းခွဲကြရပြီနော်...။ ကွဲကွာခွဲခွာခြင်းဆိုတဲ့ သဘာဝ တရားကို သွေဖီပြီး ဘ၀မှာ အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကို အတူရင်ဆိုင်ချင်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့လည်း တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးက ဆုံးဖြတ်ချက်ဦးတည်ရာချင်းမတူညီလေတော့ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ကိုပဲ အလေးပေး အရေးထားကြရမှာပေါ့။
ဘယ်လိုအခက်အခဲအတားအဆီးပဲရှိပါစေ စိတ်ဓါတ်ကိုကြံ့ကြံ့ခိုင်အောင် တင်းထားပြီး ကိုယ့် ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးပဲ သူငယ်ချင်း။ ငါတို့ငယ်ငယ်က ကဗျာလေး တစ်ပုဒ် ဖတ်ဖူးခဲ့ကြတယ်လေ...
အောင်ပွဲ ဆက်.. ဆက်..
ဘ၀မှာ အကောက်အကွေ့များသည့်အလျှောက် ခြောက်လှန့်ဖွယ်ရာ ဖြောင့်တန်းမှုတွေ လည်းရှိတယ် သူငယ်ချင်း။ ထိုက်တန်တဲ့အကျိုးခံစားမှုရရှိဖို့အတွက် ထိုက်တန်အောင် ကြိုး စားရမယ် သူငယ်ချင်း။
အဖော်မဲ့လို့ တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ငါ့ကိုမလွမ်းပါနဲ့။ ငါပြောခဲ့တဲ့စကားလေး တွေကို သတိရလိုက်ပါ သူငယ်ချင်း။ ပြန်လည်ဆုံဆည်းခွင့်ကို တောင်းတရင်း ရှိဆဲ ရှိမြဲ သူငယ်ချင်းတွေကို တန်ဘိုးထား မြတ်နိုးနေလျှက်...။
ဆည်းဆာချိန်ရဲ့ နေရောင်ခြည်အလင်းတန်းလေး များက တိမ်တိုက်ကလေးများကြားမှ မ၀ံ့မရဲအ ကြည့်လေးနဲ့ ရေပြင်ကျယ်ကျယ်နဲ့ စိမ်းလန်းစိုပြေ နေတဲ့ အပင်လေးများတည်ရှိရာ ကမ်းစပ်ကလေး ရဲ့ တစ်နေရာမှာ ကြည်နူးမှုအပြည့်နဲ့ ရှိနေကြတဲ့ ချစ်သူနဲ့ ကျွန်တော့်ကိုမြင်ပြီး နှစ်လိုအားမရဖြစ် ကာ အေးစိမ့်ငြိမ်သက်နေတဲ့ ရေပြင်ညီလေးကို နမ်းရှိုက်မိလေသလား..။
အေးမြတဲ့ ရေပြင်ညီလေးပေါ်မှဖြတ်သန်းတိုက် ခတ်လာတဲ့ လေပြေလေညှင်းလေးများကလည်း ကမ်းစပ်မှာရှိတဲ့ အရောင်အမျိုးမျိုး၊ အပွင့်အမျိုးမျိုး ဖူးပွင့်နေရှာတဲ့ ပန်းပင်ငယ်လေးများအား ``ကြည် နူးမှုတွေအပြည့်ရှိနေကြတဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦးကိုကြည့် ကြပါအုံးလော့´´ဟု လှုံ့ဆော်အသိပေးနေသည့် အလား..။
နားခိုရာ ငှက်မောင်နှံလေးတွေကလည်း ချစ်သူနဲ့ကျွန်တော် အချစ်ချင်းပြိုင်ဆိုင်နေကြပုံကို မြင်ပြီး နှစ်သက်ကြည်နူး၍ သူတို့ရဲ့နားဝင်ချိုိဖွယ် တေးချင်းလေးများနှင့်အတူ ဂုဏ်ယူအား ပေးနေကြသည့်အသွင်..။
ချစ်သူသာလျှင် ကျွန်တော့်အတွက် အနက်ရှိုင်းဆုံးအချစ်တွေကို ဖန်ဆင်းပေးစွမ်းနိုင်သူပါ။ ချစ်သူရဲ့ သွယ်လျလျလက်ချောင်းလေးများအစုံကို ဆုတ်ကိုင်ပြီး၊ ဘ၀အတွက် အားမာန် သစ်တွေကိုတဖန် မွေးမိပါရောလား။ ချစ်သူရဲ့ နဖူးပြင်ထက်က ဆံနွယ်ခက်ကလေးများကို သပ်တင်ပြီး နူးညံ့ပျော့အိနေတဲ့ ချစ်သူရဲ့ပါးပြင်လေးကို နမ်းရှိုက်ထိတွေ့မိတဲ့အချိန်မှာ ချစ်သူအတွက်ကြင်နာမှုများစွာကို ထပ်ကာတိုး၍ ချစ်လိုက်မိပေါ့။ ချစ်သူရဲ့ ပန်းနုရောင် နှုတ်ခမ်းလေးနားအရောက် ချစ်သူရဲ့နှုတ်ခမ်းအစုံမှ လေသံဖွဖွလေးနဲ့ ထွက်ပေါ်လာတဲ့စကား လေးက ကျွန်တော့်ကိုသိပ်ချစ်တယ်တဲ့လေ။ ချစ်သူရဲ့ မျက်ဝန်းအစုံမှ ကျရောက်လာတဲ့ အလှဆုံးအပြုံလေးက ကျွန်တော်နဲ့အတူချစ်ကမ္ဘာလေးတစ်ခု တည်ဆောက်ကြရအောင်တဲ့။ ချစ်သူရဲ့ခွန်အားအစုံက ကျွန်တော့်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲသို့ကျရောက်လာပြီး တီးတိုးရေရွတ်ကြား လိုက်ရတဲ့စကားလေးက ကျွန်တော့်ကို သူ့အနားမှာ အမြဲရှိစေချင်တယ်တဲ့လေ..။
လှပလွန်းတဲ့ ဆည်းဆာလေးကို ပျောက်ဆုံးသွားမှာ စိုးရိမ်မိတယ်ကွယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ချစ်သူနဲ့အတူနေရဖို့အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်အခိုင်အမာချဖို့ရန် ကြိုးစားနေရတဲ့အချိန်မို့ ခဏ သာခွဲခွာရဦးမှာပဲလေ..။
ချစ်သူနဲ့ ခေတ္တခွဲခွာချိန်လေးမှာ နှုတ်ဆက်အနမ်းပေးဖို့ရန်အတွက် ချစ်သူရဲ့ပါးပြင်လေးကို နမ်းရှိုက်လိုက်မိကာ စူးရှရှအပူရှိန်ကိုခံစားလိုက်မိကာမှ သြော်.... ငါ့ရဲ့စိတ်ကူးအတွေးတွေ နယ်ချဲ့နေတာပါလား။ ငါ့အပေါ်မှာ ကျရောက်နေတာ အရှိန်ပြင်းပြင်းနေရောင်ခြည်တွေ။ စူးရှရှနေရောင်ခြည်တွေက ``ချစ်သူတွေကြည်နူးကြတဲ့ ဒီနေရာမှာ ချစ်သူမရှိတဲ့သူ လာရသလား´´ဆိုပြီး ဒေါသအဟုန်ဖြင့် အပူတွေကိုအစွမ်းကုန်ထုတ်လွှတ်ပေးနေရော့ သလား..။
ဆူပွက်လုနီးပါး ပူလောင်နေတဲ့ရေပြင်ကို ဖြတ်ကျော်ပြီးတိုက်ခတ်လာတဲ့ လေပြင်းကလည်း ``ချစ်သူမရှိတဲ့သူအတွက်´´ဆိုပြီး လေအဟုန်ပြင်းပြင်းတိုက်ခတ်ကာ ကမ်းစမ်းနှင့်အနီးအနား မှာရှိ အပင်တွေကို လှောင်ပြောင်စေပြီး၊ ``ချစ်သူမရှိတဲ့သူ့ကို မောင်းထုတ်လိုက်တော့ ဟေ့...´´လို့ ကြွေးကြော်နေကြသည့်အလား..။
နားခိုရာ ငှက်မောင်နှံလေးတွေကလည်း ``ချစ်သူမရှိတဲ့သူ့ကိုမြင်ရတာ ငါတို့အတွက် နိမိတ် မကောင်းဘူး..´´။ ``ဒီနေရာကနေပြီးထွက်ခွာသွားအောင် အသံကုန်ဟစ်လိုက်မှ´´ ဆိုပြီး ငှက်မောင်နှံတွေရဲ့ ငြူစူကြိမ်းမောင်းမှုကို ခံနေရသည်အလား..။
ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်ပါတယ်လေ။ ငါ့မှာချစ်သူမှမရှိတာပဲ။ ချစ်သူမရှိတဲ့ ငါ့အတွက် အရာရာတိုင်းဟာ လှပနိုင်ပါ့မလား။ ချစ်သူရဖို့အရေးကြိုးပမ်းခဲ့သမျှလည်း မည်သူကမျှ အလေးအနက်ထားပြီး နှလုံးအိမ်ထဲသို့ ထည့်သွင်းတွေးတောပေးဟန်မရှိကြ။ ``အင်း... ရှိပါစေတော့´´ငါပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ငါ့ရဲ့အချစ်တွေဟာ ခါးတီးလွန်းတဲ့အသွင်ဖြစ်နေလို့ပဲရှိမှာ ပေါ့။ ရှေ့ဆက်ပြီး စွမ်းအားအပြည့်နဲ့ မျှော်လင့်ဖို့ဆိုတာလည်း မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ တမ်းတမှုတစ်ခုတော့ တည်ရှိနေချင်သေးတယ်။ ``ငါ့ရဲ့ စိတ်ကူးယဉ် အတွေးလေးအတိုင်း ငါ့ရဲ့အချစ်လောကမှာဖြစ်လာနိုင်ပါအုံးမလား......´´။
မဆုံရ... အမှားများသာ ဖုံးကြကုန်၏။
သူဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကိုယ် အရှုံးပေးလေ့ရှိတဲ့ တစ်ဦး တည်းသော လူသားတစ်ဦး ဖြစ်၏။ ကိုယ်၏ မဆောင်း ရက်သော သရဖူလည်းဖြစ် ၏။ ကိုယ့်သံသရာ၏ အ တောင်ပံလည်း ဖြစ်လေ သည်။
အချစ်တစ်ခုကို ရူးသွပ်စွာစွဲလန်းလောက်အောင်ထိ ချစ်ခဲ့ဖူးပါသည်။ ငါဟာ အချစ်အမျိုးမျိုး၊ အဆင့်အတန်းအမျိုးမျိုး ရှိကြတဲ့အနက် နုံချာချာအညတြလူသားထဲက အချစ်မျိုးကို ပိုင်ဆိုင် မိသူပါ။ ဒါပေမယ့် ငါချစ်တဲ့သူရဲ့ပေါ်မှာ ချစ်မိတဲ့အချစ်တွေကတော့ ကမ္ဘာမှာအချမ်းသာဆုံးဖြစ် နေမှာပါ။
စည်းစိမ်အပြည့် ခြံရံထားတဲ့သူရဲ့နှုတ်မှ အချစ်ဆိုတဲ့စကားလေးကို ပြောထွက်လိုက်မှ အချစ်လို့ သတ်မှတ်ကြပါသလား?
ကဗျာတွေ၊ စာတွေ လှလှပပစီခြယ်ပြီးပြောတတ်တဲ့သူရဲ့နှုတ်မှ အချစ်ဆိုတဲ့စကား လေးကို ဖွင့်ဟလိုက်မှ အချစ်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်မြောက်ပါသလား?
ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကို ရိုးရိုးစင်းစင်းလေးပြောထွက်တတ်သူရဲ့နှုတ်မှ ပြော ထွက်လိုက်တဲ့ အချစ်ဆိုတဲ့စကားလေးကို အချစ်နယ်ပယ်၏ စွန့်ပယ်ခြင်းမှသည် အပယ်ခံအချစ်အဖြစ် သတ်မှတ်ကြပါသလား?
အဲ့ဒီ အချစ်တွေထဲမှ ငါဟာ... အပယ်ခံအချစ်ကို ပိုင်ဆိုင်မိသူပါ။ ငါဟာ... အခြားသူတွေလို အချစ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်လေးကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစကားညွန့်လေးတွေသုံးပြီး ချစ်ရသူနာပျော် ဖွယ် ဖြစ်အောင်ပြောမထွက်တတ်တဲ့သူပါ။
ငါ....ပြောသမျှ၊ ငါ... ချစ်သမျှ သူ့အတွက် ရီစရာတွေပေါ့။ ငါ... ရူးသွပ်စွာ စွဲလန်းခဲ့သမျှ သူ့အတွက် ဟာသတွေပေါ့။ ငါ... တစိမ့်စိမ့်ခံစားရတဲ့အကြောင်းလေးတွေကို ရင်ဖွင့်ခဲ့သမျှ သူ့အတွက် နားပူစရာလေးတွေပေါ့။
ဒါပေမယ့်.... ငါဟာ အချစ်ကိုကိုးကွယ်တဲ့လူတစ်ယောက်ပီပီ ငါ့ရဲ့အချစ်ကို ဘယ်လိုပဲ သတ်မှတ်ပါစေ ချစ်ရသူတစ်ယောက်ကိုတော့ ချစ်၍ ချစ်ဆဲ ချစ်မြဲပါပဲ။
(မချစ်နိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ကို စွဲလန်းမိသူ၏ အဖြစ်)
Online Chat Room လေးမှာပဲ
သူ့ရဲ့တပည့် “နမိတ်ဆိုး” စစ်သည်တွေကို
ဖြစ်မလာစေတဲ့ “ကြမ္မာဆိုး” စစ်သူကြီးတွေကိုပါ
ကွဲကွာ၊ ခွဲခွာရခြင်းသည် ဆင်းရဲ၏။
အဲ့ဒီဆင်းရဲခြင်းတွေနဲ့ နှောင်ဖွဲ့ခံထားရသည့် သတ္တ၀ါသည် `လူ´ ဖြစ်သတဲ့....။
`လူ´ဆိုတဲ့နာမ်စားအမည်ခံလေးနဲ့ လူ့ဘ၀လေးထဲကို ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါပြီ။ ဘယ်ဘ၀က လာလို့ ဘယ်ဘ၀ကိုသွားမှာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေကိုပင် ကိုယ်တိုင်တောင်မှ အဖြေမရှိခဲ့...။
ကြုံရာဆုံရာ ဖြစ်တတ်ရာရာလေးတွေကို အလှည့်ကျရင်မနွဲ့ကြစတမ်းဆိုသလိုပေါ့၊ မိမိနဲ့ အနီးကပ်ဆုံး ဆက်စပ်ရာရာလေးတွေကို စမ်းတ၀ါးဝါးနဲ့ ပီပီပြင်ပြင်မရှိလှတဲ့ စိတ်ကူးလေး တွေနဲ့အတူ လောကဓံရဲ့စိန်ခေါ်မှုကြီးကို အလဲထိုးဖို့ရာ ဆန္ဒတွေအပြည့်မွေးလို့ လျှောက်လှမ်း နေသူက ငါရယ်ပါ။
၀န်းကျင်ဒေသအလိုက် အရောင်အမျိုးမျိုး၊ ဦးတည်ချက်အမျိုးမျိုးပြောင်းပြီး ၀န်းကျင်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ဖို့ရာ ကြိုးစားခဲ့ရပေါင်းလည်းမနည်းတော့ပါဘူး။
လောကဓံရဲ့ ရိုက်ချက်ပြင်းပြင်းလှိုင်းများကလည်း ငါ့ကိုမှ အားမနာ။ လေသင့်ရင် လှိုင်း ကြက်ခွတ်လေးတွေကို သာသာယာယာကြည်ကြည်နူးနူးမြင်ရမှာပဲဆိုတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်မျှော်လင့် ချက်လေးတွေကြောင့် ရိုက်ချက်ခတ်ပြင်းပြင်းလှိုင်းရဲ့ ဒဏ်လေးတွေကို မျက်စိမှိတ်ပြီး အားတင်းထားမိလေရဲ့။
လွတ်မြောက်ရာလမ်းကြောင်းလေးဆီသို့ အားကုန်လှော်ပြီးသွားမယ်စိတ်အကူးမှာ လှော်တက် ရယ် မဲ့နှင့်ပြီးသား လှေအိုလေးပေါ်မှာ ဖြစ်နေလေပြီ။ ဒီလှေအိုလေးဟာ ငါနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ လှေခလေးဖြစ်တဲ့အတွက် ငါပိုင်ဆိုင်ရမယ့် လှေအိုလေးပေါ့။ ဒီလှေအိုလေးကိုအားပြုပြီး အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ဆီသို့ရောက်အောင် လှော်ခတ်မည်ဆိုတဲ့စိတ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး လှော်တက်အစား ကိုယ်ပိုင်လက်ခလေးတွေနဲ့ ကြမ်းတမ်းလှတဲ့ရေလှိုင်းတွေကို ထိတွေ့ပြီး လှော်ခတ်မိပါရောလား။
သြော်... ရှိပါစေတော့။ ရည်မှန်းရာပန်းတိုင်ဆီသို့မရောက်မချင်း ငါ့ရဲ့အမေပေးထားတဲ့ လှော်တက်(လက်ချောင်းဆယ်ချောင်းပါလက်နှစ်ဘက်)နဲ့ ဘ၀ဆိုတဲ့ ကမ်းမမြင်လမ်းမမြင် ဘ၀ သမုဒ္ဒရာကြီးထဲမှာ ထိုလှေအိုလေးနဲ့အတူ ပဲ့ကူမရှိ ဘ၀ကပေးတဲ့စွမ်းအားတွေနှင့်အတူ မုန်တိုင်းကြောင့်လှိုင်းခတ်တဲ့ဒဏ်ကို ကြံ့ကြံ့ခံပြီး ဘ၀ရဲ့နေ၀င်ချိန်လေးတိုင်အောင် လှော်ခတ် နေမည်သာ...။